Nilatsaka ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina, omaly. Hitohy anio izany raha ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby. Mila mivonona amin’izany ireo rehetra hivoaka ny trano, indrindra ireo mpianatra izay efa miverina an-dakilasy. Hafana hatrany anefa ny andro saika manerana ny Nosy.
Ho fisorohana ny pesta tsy ho tonga eny anivon’ny fonja, hovatsina fitaovana ireo toeram-pamonjana 16 eto Madagasikara. Hisy fanafody sy fitaovana fampiasa amin’ny fisorohana ny aretina ao anatin’ny fanomezana atolotry ny Unicef izay iandraiketan’ny BNGRC. Hahazo fitaovana fitsapana hafanana ny fonja eto Analamanga izay iarahana amin’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny Croix Rouge.
Nanome fanampenam-bava miisa 30.720 sy fitaovana fitsapana hafanana eo amin’ny handrina miisa 400 ary lamba firakotra 200 isa ny governemanta japoney amin’ny Jica hiadiana amin’ny aretina pesta. Vokatry ny antso avo nataon’ny fanjakana malagasy no nanomezana ireo fanampiana ireo.
Efa malaza eto amintsika ny “Halloween” raha ny Amerikanina no tena mankalaza azy. Misy ireo mpikarakara lanonana manomana hetsika hanamarihana ity “Halloween” ity. Mandeha araka izany ny bizina amin’ireo karazana akanjo sy saron-tava mampatahotra. Anisan’izany ny akanjo miendrika mpamosavy, matoatoa, maty mitsangana…